IN LA DHISO DAL DACHA LEH GACMAHOODA - DHISMAYAASHA
Xadiiqaddu marwalba waxay siisaa jawi wanaagsan, ama kaliya nasasho buuxda oo ka soo jeeda nolosha magaalada ee jilicsanaanta dabiiciga ah. Qofka si dhakhso ah ama ka dib wuxuu dareemayaa inuu kali ahaan u yahay kaynta, webiga, xayawaanka, samada, qorraxda sida ugu macquulsan. Wuxuu siinayaa nabad iyo dareen weyn.
Hadda ka dib "xagga samada ilaa dhulka." Guriga xagaaga waa, dabcan, waa fiicanyahay, laakiin qofku ma sameyn karo iyada oo aan la qaboojin kuleylka xagaaga. Oo haddii laydin gacangeliyo, markaas roonaantiisu waa ka sii farxaysaa. Sidaa daraadeed nala bilaabi.
Qalabka dhismaha qubeyska
Qaab dhismeedka noocaas ah, mabda 'ahaan, ku dhawaad ​​dhammaan qalabka gacanta. Waxay noqon kartaa dabacsanaan, polycarbonate, hadhaaga dhaadheer ee qaabka, lebbiska, dhagax, boorka, guud ahaan, wax kasta oo ka soo socda dhismaha ma dhaawacaan.
Dhinaca kale, "dhismo ku-meel-gaar ah" sidoo kale maaha mid aad u wanaagsan, sababtoo ah iyada oo ay ku khasban tahay in ay xishoonayso xilli kasta. Sidaa darteed, waxaa lagu talinayaa in la dhiso wax ka dhexeeya caasimadda iyo ku meelgaarka ah.
Doorashada meel lagu dhisayo qubeys
Marka hore, meesha waa in ay ahaato qorraxda, maaha dabayl oo aan aad uga fogeyn guriga.
Dhismaha musqusha dalka oo gacmaha ku leh goobta.
Ogow halkan ku saabsan dhisidda aqalka dhirta lagu koriyo ee polycarbonate adiga oo isticmaalaya gacmahaaga.
Dhammaan wixii ku saabsan hoteelka ee bixinta //rusfermer.net/postrojki/sadovye-postrojki/teplichnie-soorujeniya/parniki-etapy-stroitelstva-i-osobennost-vyrashhivaniya-v-nem.html.
Wadada qoryaha qubeyska
Qoryaha waa wax dabiici ah, waxay ku dhuftey diirimaad iyo raaxo, waxayna ku haboonaan doontaa naqshad kasta oo goobta ah.
Tusaalahan, tixgeli naqshad qubeyska fudud. Halkan waxaad ku heli kartaa qaab fudud, i.e. samee masruufka caadiga ee taangiga (sheyga), ku dar dhammaan qeybaha lagama maarmaanka ah, oo xir meesha qubeyska oo leh sheyga caadiga ah ee musqusha.
Haddii aad xiiseyneyso naqshad aad u dheer oo nafta ah, markaa waa inaad si dhab ah u qaadataa dhismaha.
Goobta hore loo doortay waxaad u baahan tahay inaad sameyso aasaas adag. Si arrintan loo sameeyo, waxaan qodno birta dhulka ama qashinka asbestos-cement oo leh dherer ah ilaa 2 mitir.
Talaabada xigta waa in la sameeyo qaab dhismeed adag oo alwaax ah. Marka xigta, ku dhig qaabka dhexe ee saldhigga. Boorsada waa inay ahaato mid raaxo leh intii suurtogalka ah, markaa ka fikir inaad ka horayso. Ka dibna waxaan ku dhejin karnaa derbiyada guddi, iyada oo aan kala tagin farqiga u dhexeeya iyaga.
Waxaan sidoo kale dhulka ku dhejin karnaa boorso, laakiin adigoo ka tegaya khiyaamo yar, waxaad ku dari kartaa boombalo gaar ah iyo tuubbo godan ah. Sariirta waa inay ahaato mid xoogan oo ku filan si ay u taageerto miisaanka haanta biyaha. Tani waxay kaa caawin doontaa qulqulooyinka iswada leh. Ama ha ku rakibin taangiga ha saarin saqafka, laakiin mid ka mid ah dhinacyada sababo amni awgood.
Sariirta waxaa lagu dabooli karaa polycarbonate oo hufan, oo markaa, hubinaysa in nalalka ku filan iftiinka maalintii. Ku rakib taangiga, qasacada, biyaha. Geedka waa in laga ilaaliyaa qoyaanka iyo cayayaanka, oo lagu daboolo caanaha ama waxyaallaha gaarka ah.
Gudaha gudihiisa waxay u baahan yihiin shelf iyo joodar. Iyada oo la adeegsanayo daahir aan dherar lahayn, waad kala sooci kartaa aagga dharka iyo shukumaanada. Muuqaalka guriga "guriga" waxaa lagu qurxiyey waxyaabo ku habboon qaabeynta goobta. Biyaha ayaa diyaar u ah!
Beddelaadyada tuubooyinka waa aasaaska taageerada dhulka hoostiisa. Wax yar ayaannu qodno, iyadoo ku xiran cabbirka qubeyska, godadka, ciidda, caleemaha, xoojinta, ka dibna lebboorka ku rid shimbiraha.
Intaa ka dib, waxoogaa ka dib ayaan bilaabeynaa inaan dhisno dabaqa. Guddi loogu talagalay dabaqa ayaa ka fiican in la isticmaalo berriga. Ma cabsanayso qoyaan, heerkul sare iyo hooseeyna. Dhul-beelka waa in lagu rakibaa wakhtiyada u dhaxeeya guddiga si loo geliyo qoyaanka.
Kadibna waxaan diyaarinaynaa qaabka cabirka, rakibo oo raacno isla falalka falalka sida kor ku xusan.
Radishes, sii kordhaya beerta.
Karootada, dheefta iyo waxyeelada - ka raadi boggayaga www.rusfermer.net/ogorod/korneplodnye-ovoshhi/vyrashhivanie-v-otkrytom-grunte-korneplodnye-ovoshhi/osobennosti-posadki-i-vyrashhivaniya-morkovi.html.
Dabeecaddu waa abuur furfuran, nasasho waa inay noqotaa mid raaxo leh, iyadoon loo eegin waxa. Meelaha qubeyska ayaa wanaagsan marka ay qorrax iyo diiran yihiin, laakiin waxa la sameeyo haddii roobabku Jawaabta su'aasha waa mid sahlan - iibso taangiga biyaha kulul. Waxaa jira hanti badan oo la mid ah iibka.
Intaa waxaa dheer, qubeyska ayaa u baahan doona in ay koronto ku shaqeeyaan, si waafaqsan, u rakib jaranjarada, iyo sidoo kale iftiinka. Ka dibna qabow iyo gudcurba midna lama arki doono.
Doorashada taangoon ee dal ku qubeyska
Doorashada taangiga waa qodob muhiim ah. Waa lagama maarmaan "macaamilka iyo masruufka oo dhan" oo dooro ku saleysan qadarka loo qoondeeyey.
birta aan saliida lahayn
Marka laga eego dhinaca aragtida amniga iyo adkeysiga maaddada, waxa fiican in la doorto taangiga ka samaysan birta aan saliida lahayn ama birta galvanized.
Nolosha adeegan ee qalabkani waxay noqon doontaa ugu yaraan 10 sano, laakiin kharashka noocan ah waa mid aad u sarreeya. Waa hagaag, si lacag loogu keydiyo, ku xir tuubo balaastik ah. Mugga ayaa sidoo kale si weyn u saameeya kharashka. On awoodda iibka laga bilaabo 40 ilaa 250 litir. Su'aashani waxay sidoo kale u baahan tahay jawaab sax ah waxayna ku xiran tahay tirada xubnaha qoyska iyo arrimo kale.
Sidoo kale fiiro soo saaraha iyo sifooyinka dheeraadka ah. Tuugooyinka fasalka dhexe, marka laga reebo kuleylka korantada iyo, suurtagal ahaan, heerkulka biyaha, wax shaqo ah ma laha. Heerka ka sarreeya - heerka biyaha, heerkulbeegga, tuubada tubbada iyo waraabinta.
Qeybta LUX waxay leedahay dhammaan hawlaha fasalada hore iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin: heerkulbeegga la dhisay (qiyaasta heerkulka kululaynta biyaha), dayactirka tooska ah ee loo dejiyay iyo xidhitaanka marka la kululeeyo heerkulka la dhigay.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan faa'iidooyinka zucchini.
Noocyada beerista ee baradhada sare leh
Faa'iidooyinka taangiyada aan lahayn kuleylka waa kaydka tamarta, looma baahna in si joogto ah loola socdo heerka biyaha. Ogolaanshaha - ma suurtageli karto in lagu isticmaalo cimilada xun.
Faa'iidooyinka mashiinka kululaynta waa cad, laakiin qashin-qubka waa in sidoo kale la tixgeliyaa - kormeer joogto ah oo ah heerka iyo bixinta biyaha, kharashaadka korantada dheeraadka ah, ka-goynta ka timaadda shabakada si loogu isticmaalo amniga, gaar ahaan loogu talagalay weelasha caagagga.
Raaxada had iyo jeer waa kharash dheeraad ah iyo sifooyin. Qaar ka mid ah, dabcan, waxaad xiri kartaa indhahaaga, qaarna waxay u baahan yihiin inay qaataan. Sidaa darteed, haddii guriga lagu booqdo xilliga qaboobaha, qubeyska waa inuu noqdaa raasumaal, oo leh iftiin, kuleyl, iwm. Waxay dhammaan ku xiran tahay hababka iyo doorbididda milkiilaha. Dadka qaarkood waxay ku kacaan ugu yaraan, halka qaar kalena ubaahan yihiin "fasalka buuxa" ee LUX.
Si kastaba, marwalba way jirtaa. Waxa ugu muhiimsan - nasasho fiican iyo "isgaarsiinta" dabiiciga ah. Samee nasasho wacan!